शेरधन राई विरुद्दको अविश्वासको प्रस्ताव पास होला कि फेल? – Merosamaya
शेरधन राई विरुद्दको अविश्वासको प्रस्ताव पास होला कि फेल?
कांग्रेस नेता सिटौलाको ग्रीन सिग्नल
मेरो समय	 Feb 22, 2021 मा प्रकाशित 75 0
१ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राई बिरुद्द हिजो प्रदेश सभामा अविश्वासको प्रस्ताब पेस भयो, मुख्यमन्त्री राई विरुद्ध प्रचण्ड–माधव समूहका सांसदहरुले १२ पुसमा सो प्रस्ताब सदनमा दर्ता गराएका थिए तरपनि सदनमा प्रबेस नपाएको यो प्रस्ताव अन्तत: टेबुल भयो । अविश्वासको प्रस्तावका प्रस्तावक इन्द्रबहादुर आङ्बोले सो प्रस्ताव पेश गर्दै “पुस ५ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असंवैधानिक रुपमा संसद विघटन गरेको र मुख्यमन्त्री राईले त्यसलाई समर्थन गरेकाले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनु परेको बताए ।”
सो प्रस्ताब पेस भए लगत्तै प्रदेश सभाका सभामुख प्रदिपकुमार भण्डारीले सदनको कारबाही फागुन २० गते दिउसो १ बजे सम्मको लागि स्थगित भएको जानाकारी गराउदै संसद बैठक स्थगित गरे ।
अबको १० दिन अर्थात फागुन २० गते सम्ममा प्रदेश १ मा के कस्तो खिचडी पाक्ने हो समयले देखाउला, तर अविश्वासको प्रस्ताव जस्तो संवेदनशील विषयमा सभामुखले ११ दिनको समय दिएकोप्रति नेकपा प्रचण्ड–माधव समूह नै असन्तुस्ट देखियो। यसलाई एति धेरै लम्ब्याउन हुने थिएन भन्ने नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहका संसदीय दलका नेता भिम आचार्यको बक्तब्य बाट प्रस्ट हुन्छ कि बिचमा हुनसक्ने संसदिय फोहोरी खेलसंग उनीहरु आफै जानकार छन !
कस्तो छ प्रदेश १ को संसदीय अंकगणित ?
कुल ९३ सदस्य रहेको प्रदेशसभामा नेकपाका ६७ सदस्य छन् । प्रस्ताब पास हुनको लागि कम्तिमा सामान्य बहुमत अर्थात ४७ मत आवश्यक पर्दछ, नेकपा विभाजनपछि ओली समूहमा २० जना खुलेका छन् । प्रचण्ड– माधव समूहमा ४७ जना छन्।तर,अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुँदा ३७ जना प्रदेशसभा सदस्यले मात्र हस्ताक्षर गरेका थिए । तर, पछी प्रदेशसभा सदस्यहरु जसमाया गजमेर, गोपाल बुढाथोकी, श्रीप्रसाद मैनाली, बसन्तीदेवी यादव र कला घलेले आफ्नो हस्ताक्षर फिर्ता लिइसकेको बताईएको छ । यसरी हेर्दा अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा अहिलेको अवस्थामा ३२ जनाको मात्रै समर्थन देखिएको छ ।
प्रदेश सभामा नेपालि कांग्रेसका २१, जनता समाजवादीका ३ र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्च तथा राप्रपाका एक/एक जना सांसद छन । प्रचण्ड माधब समुहको ३२ र कांग्रेसको १५ जनाले समर्थन गरेमा अविश्वासको प्रस्ताब सजिलै पारित हुनेछ ।
नेपालि कांग्रेसका पुर्ब महामन्त्री कृष्ण सीटौलाले आइतबार मोरङका पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै अविश्वास प्रस्तावका पक्षमा कांग्रेस उभिने बताए । सिटौलाले यस सम्बन्धमा कांग्रेस प्रदेश नम्बर १ को प्रदेश संसदीय दलले निर्णय गरी अविश्वासको पक्षमा मतदान गर्ने प्रस्ट पारेका छन्।
प्रदेश सरकारमा कसलाई समर्थन गर्नेबारे हालैको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले निर्णय गर्नुपर्ने माग गरे पनि कुनै निर्णय भएको थिएन।
पौडेल र सिटौला पक्षले मुख्यमन्त्रीहरू विरूद्ध आएका अविश्वास प्रस्तावमा समर्थन गरेर जानुपर्ने धारणा राख्दै आए पनि सभापति शेरबहादुर देउवाले यसबारे औपचारिक रूपमा धारणा दिएका छैनन्।
नेपाल इन्जिनियर्स एसोसियसन (NEA) को सदस्यता दर्ता र नबिकरण गर्ने म्याद थप
संसद विघटन गर्ने ओलीको निर्णय बदर, सर्वोच्चको ऐतिहासिक फैसला